Izinto ezingu-4 engisebenza ngazo okwamanje — Biologique
Izinto ezingu-4 engisebenza ngazo okwamanje
izithombe ngezithombe ze-Getty
Ngingumkholwa oqinile wokuthethelela ngoba uma sithethelela, singaphilisa. Futhi, uma siphilisa, singathuthuka. Kwangithatha isikhathi eside ukubona ukuthi kodwa ukuqhubekela phambili kuyisiqondiso engifuna ukuhlala kuso. Ngenkathi ngiqala ukukwenza ukuthethelela, ngacabanga ukuthi yilokho okwenzayo kanye futhi akudingeki uphinde uyenze. Kodwa, ngifunde futhi ngisafunda, ukuthi ukuthethelelwa akupheli. Nsuku zonke kunokuthile okuthethelela. Yilokhu engikusebenzela ekuxoleleni namuhla:
1. Mina ngokwami.
Konke kuqala futhi kuqala ngokwakho. Angikwazi ukuzibuza ukuthethelela abanye uma ngingakaze ngithethelele. Ngithole ukuthethelela kokubili okubuhlungu nokukhulula ngoba kufanele ngivume futhi ngihlale kulokho engikwenzile kimi nakwabanye okwangenza ngifuna ukuthethelela. Kodwa, lo msebenzi uyadingeka. Kungakhathaliseki ukuthi ngizithethelela ngokubiza amathanga ami amakhulu noma ukukhipha ukukhathazeka kwami komunye, ukuzithethelela kungisiza ukuba ngiqhubeke.
Nakuba ukukoloni kwakunezici ezimbalwa ezinhle, kwakunezinkinga eziningi. Ikakhulukazi evela ezwekazini (i-Afrika) lapho ikholoni inakho, futhi kunjalo, ngokuba nemiphumela emibi emnothweni, kwezolimo kanye nabantu, kuyadambisa. I-Colonization iye yazama ukuhlukumeza ikoloni yenkambiso yabo futhi yaqinisekisa ukuthi iYurophu noma abantu base-European-desccent bangcono kunezinye. Uma ngibheke nxazonke futhi ngibona indlela le ndlela yokucabanga isishiyile ngayo, ingenza ngidabuke. Kodwa, njengoba nje ngishilo ngaphambili, ukuthethelelwa ngokuphathelene nokuqhubekela phambili. Ngiye ngafunda ukuthi ukusola akuxazulula izinkinga. Kuye kwadingeka ngithethelele okhokho bami baseYurophu ngokuxhaphaza nokusebenzisa ama-Afrika ami futhi ngamukele ukuthi lezi zici ezimbili zihlala ngaphakathi kimi. Uma ngiqhubeka ngithukuthele isiko laseYurophu, ngithukuthele ngenye ingxenye futhi ngithukuthele abangane bami abaningi. Ngakho-ke, ngiyikhulula leyo ntukuthelo futhi ngifaka leso sibindi ekuvuseleleni kabusha. Ngizakhele kabusha, Umndeni Wami nezwe. Ukuze ngikhulule ukucindezelwa futhi ngamukele uthando kubo bonke, ngendlela okufanele siyenze ngayo. Ngoba uthando lunikeza amandla futhi lusisiza sikhonyane.
Ngivulekile kakhulu mayelana nobuhlobo enganginabo namadoda empilweni yami. Futhi, nje nje nje, ngithole ukuqonda ukuthi kungani amadoda amaningi engiwabona nxazonke angenalo ukuzimisela ukuxhuma. Isizathu, ngiyakholwa, kungenxa yokuthi silindele amadoda ukuba avikele ukuthi yibo ngempela abagqoke i-macho-mask. Ukushiya abaningi babo ekuphikeleni amandla abo ngokomzwelo. Lokhu ukuqonda kungisize ngithethelele. Muva nje, ngathola ukuthi indoda eyayikhiphe isithakazelo kimi, yayithandana nomunye wesifazane. Ngokwemvelo, ngathukuthele futhi ngavala noma yikuphi okulindelekile kuye. Ngisenkonzweni yokuthethelela ngoba ngiyazi ukuthi ukuziphatha kwakhe akuhlangene nami futhi ngifuna ukuzikhulula emgodini ukuze abe nami. Ngifanele ukuba nomuntu omuhle futhi angikumi ngendlela yalokhu ngokubamba umuntu ongakwazi ukungiqonda. Ngiqhubeka ngothando nokuthethelela.
4. Abantu abangakalungeli ukwamukela uthando lwami.
Kungithatha cishe impilo yami yonke ukuqonda ukuthi kufanele uthandeke, kufanele wamukele uthando. Ngifinyelele abantu abaningi engangibathande kakhulu futhi ngicabanga ukuthi nginamandla noma nginingi kakhulu, kuphela ukubona ukuthi babengakulungele. Manje, esikhundleni sokushintsha indlela engiyithandayo, ngiya kubantu abalungele ukwamukela uthando ezingeni lami. Ngaphezu kwalokho, ngivumela ukuthi ngiyeke kulabo engikunike kakhulu futhi angabuyisanga ngoba ukubala ukuthi nginikele omunye futhi angabuyisanga kuyangikhathaza futhi kungiphatha kuphela. Ngishiya lobudlelwane ngiyazi ukuthi nginikele okungcono kakhulu futhi okwanele.
Newer Post5 questions to ask yourself before you let go of a friendship.
Older Post5 things that I wish I’d known before starting my first business.